Komaandooska Soomaaliya oo bur-buriyay xarumo Al-Shabaab. | Keydmedia
Komaandooska Soomaaliya oo bur-buriyay xarumo Al-Shabaab.
Ciidamada DANAB ayaa howl-gal ay ka sameeyeen Gandarshe ku bur buriyay talisyo ay Al-Shabaab halkaas ku leeyihiin.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee DANAB ayaa howlgallo qorsheysan saacadihii la soo dhaafay ku fuliyay deegaanka Gandarshe ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Saraakaal u hadlay ciidamada DANAB ayaa sheegay in intii u socday howl-galka ay bur buriyeen fariisimo ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka, kuwaas oo la aaminsanyahay in ay weerarada ka soo abuulaan, islamarkaana lagu far sameynayay waxyaabaha qarxa.
Sidoo kale sarkaalka u hadlay DANAB ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan Al-shabab, kuwaas oo ku sugnaa deegaanka howl-galka laga sameeyay, waxaa uuna sheegay in ay Hay'adaha amaanka ku wareejin doonan.
Dhinaca kale qoraal kooban oo la soo dhigay bogga Wakaaladda ku hadasho afka Dowladda ee SONNA ayaa lagu sheegay in howl-gal laga sameeyay Gandarshe lagu soo qabtay xubno shabaab ah, xarumana lagu bur buriyay.
"Kumaandooska Danab oo howlgal qorsheysan ka sameeyey deegaanka Gendarshe ee ayaa waxay ku bur-buriyeen goobo Qaraxyo lagu farsameynayey, iyagoo gacanta ku dhigay xubno shabaab ah oo halkaasi ku sugnaa.” ayaa lagu yiri qoraal SONNA lagu daabacay.
Deegaanka Gandarshe ayaa ah deegaan dhaca dhinaca Xeebta Koonfureed ee Muqdisho, waxaa uuna u dhaxeeyaa magaalooyinka Muqdisho iyo Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose.